အီဂျစ်မှ စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီပရိုမိုးရှင်း၏ ဇန်န၀ါရီဆုရှင်နှင့် တွေ့ဆုံလိုက်ပါ!
လစဉ်လတိုင်းတွင် FBSသည် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို ကျင်းပပေးနေပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံးသောဆန္ဒတွေကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်. ယခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ၏ ကံထူးရှင်မှာ အီဂျစ်နိုင်ငံ Al-Rubaaမှ Ahmad Mohsenဖြစ်ပါသည်. သူလိုချင်နေခဲ့သည့် ဘရန်းနယူး Nikonကင်မရာတစ်လုံးကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်.
Mr. Mohsenဟာ Tantaတက္ကသိုလ်မှာ စီးပွားရေးပညာကို လေ့လာသင်ယူနေပေမယ့် အကြွေးဝယ်ကတ်တွေ ငွေကြေးတွေအကြောင်းတင်မက သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဓာတ်ပုံပညာကို မြတ်နိုးနှစ်သက်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသော အမှတ်တရတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့အတွက် ကင်မရာအသစ်တစ်လုံးကို တောင်းဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်.
FBSဖောက်သည်တွေအနေနဲ့ သိထားရမှာက: သိပ်မမျှော်လင့်ထားရင်တောင် သင့်အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. Mr. Mohsenအနေနဲ့ အရင်က Forexထရိတ်တာမလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာကတော့ Forexဘရုတ်ကာကုမ္ပဏီတစ်ခုကပါ.
"ကျနော့်အနေနဲ့ အခုလို ဆုရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ပါဘူး. အရှုံးမရှိဘူး စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ" -လို့ သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်. မှန်ပါတယ်. အခုတော့ သူဟာ သူ့နောက်ထပ်အိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် Forexကိုလေ့လာနေပါပြီ. အခုတော့ သူ့အိပ်မက်တွေကို အဆုံးစွန်မက်ခွင့်ရပါတော့မယ်!
သင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေလဲအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် - ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်သိနေပါပြီ! အခုတော့Ahmad Mohsenရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ပြီး စိတ်ခွန်အား ရယူလိုက်ပါ.